Ọnụ ụlọ ndị a na-anọ eri ihe (1-14)
A tụrụ akụkụ anọ nke ụlọ nsọ (15-20)
42 O mechara kpọta m n’ogige dị ná mpụta nke chere ihu n’ebe ugwu.+ Ọ kpọbatakwara m n’ụlọ a na-anọ eri ihe nke dị n’akụkụ ebe a na-arụghị ihe ọ bụla,+ n’ebe ugwu ụlọ a gbakwụnyere agbakwụnye.+ 2 Ogologo ụlọ ahụ a na-anọ eri ihe dị otu narị (100) kubit* n’ebe e nwere ọnụ ụzọ n’ebe ugwu. Obosara ya dị kubit iri ise. 3 Ọ dị n’agbata ogige dị n’ime, nke dị kubit iri abụọ,+ na pevment dị n’ogige dị ná mpụta. Ọ bụ ụlọ elu dị okpukpu atọ, o nwekwara varanda ndị chere ibe ha ihu. 4 N’ihu ụlọ ndị ahụ a na-anọ eri ihe, e nwere paseeji bara n’ime+ nke obosara ya dị kubit iri, ogologo ya adịrị otu narị (100) kubit. Ọnụ ụzọ ụlọ ndị ahụ chekwara ihu n’ebe ugwu. 5 Ọnụ ụlọ ndị dị n’elu elu a na-anọ eri ihe asarughị mbara ka ndị dị n’okpuru ha nakwa ndị dị n’ala ụlọ ahụ, n’ihi na varanda ndị dị na ha mere ka ha dị ntakịrị. 6 Ụlọ ahụ a na-anọ eri ihe bụ ụlọ elu dị okpukpu atọ. E nwere ogidi ndị dị n’ogige ahụ, ma, e nweghị ogidi ọ bụla dị n’ụlọ elu ahụ. Ọ bụ ya mere ọnụ ụlọ ndị dị n’elu ji dị ntakịrị karịa ndị dị n’etiti na ndị dị n’ala ụlọ ahụ. 7 Mgbidi e ji nkume rụọ, nke dị ná mpụta, dị nso n’ụlọ ahụ a na-anọ eri ihe nke chere ihu n’ogige dị ná mpụta, nke chere ihu n’ụlọ ndị ọzọ a na-anọ eri ihe. Ogologo mgbidi a dị kubit iri ise. 8 Ogologo ụlọ ndị ahụ a na-anọ eri ihe, ndị chere ihu n’ogige dị ná mpụta, dị kubit iri ise. Ma, ndị nke chere ụlọ nsọ ahụ ihu dị otu narị (100) kubit. 9 E nwere ọnụ ụzọ dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ma e si n’ogige dị ná mpụta na-abata n’ụlọ ahụ a na-anọ eri ihe. 10 E nwekwara ọnụ ụlọ ndị a na-anọ eri ihe n’ebe ndịda. Mgbidi ahụ e ji nkume rụọ, nke dị n’ogige ahụ, chere ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ ọnụ ụlọ ndị ahụ. Ọnụ ụlọ ndị ahụ dịkwa nso n’ebe ahụ a na-arụghị ihe ọ bụla nakwa n’ụlọ ahụ.*+ 11 E nwere paseeji dị n’ihu ọnụ ụlọ ndị ahụ a na-anọ eri ihe n’ebe ndịda nke yiri paseeji dị na nke ebe ugwu.+ Ọnụ ụlọ ndị ahụ niile hà n’ogologo, harakwa n’obosara. Ụzọ niile e si apụ na ha yiri ibe ha. Otú ha dị n’anya bụkwa otu. Ụzọ e si abanye ha 12 yiri ụzọ ndị e si abanye n’ọnụ ụlọ ndị a na-anọ eri ihe ndị dị n’ebe ndịda. E nwere ụzọ mmadụ nwere ike isi bata, nke dị n’ebe paseeji ahụ bidoro. Ụzọ ahụ dị tupu e ruo mgbidi e ji nkume rụọ, nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ.+ 13 Ọ gwakwara m sị: “Ọnụ ụlọ ndị a na-anọ eri ihe, ndị dị n’ebe ugwu na ndị nke dị n’ebe ndịda, bụ́ ndị dị n’akụkụ ebe ahụ a na-arụghị ihe ọ bụla,+ dịcha nsọ. Ndị nchụàjà ndị na-abịakwute Jehova na-anọ na ha eri ihe kacha nsọ e ji chụọ àjà.+ N’ebe ahụkwa ka ha na-edosa ihe ndị kacha nsọ e ji chụọ àjà, ma àjà ọka ma àjà mmehie ma àjà ikpe ọmụma. Ha na-edosa ihe ndị a ebe ahụ n’ihi na ebe ahụ dị nsọ.+ 14 Ndị nchụàjà bata ebe ahụ dị nsọ, ha ekwesịghị isi na ya pụọ gaa n’ogige dị ná mpụta n’ebughị ụzọ yipụ uwe ha na-eyi eje ozi,+ n’ihi na uwe ha dị nsọ. Ha ga-eyiri uwe ọzọ gaa ebe e nyere ndị ọzọ ikike ịnọ.” 15 Mgbe ọ tụchara ebe dị n’ime ime ụlọ nsọ,* o si n’ọnụ ụzọ ámá nke chere ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ kpọpụta m+ ma tụọ ebe ahụ niile. 16 O ji okporo ahịhịa amị* e ji atụ̀ ihe tụọ akụkụ ya nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ. Mgbe o ji okporo ahịhịa amị ahụ tụọ akụkụ ya abụọ, ọ tụtara ya narị okporo ahịhịa amị ise (500). 17 Mgbe ọ tụrụ akụkụ ya nke dị n’ebe ugwu, ọ tụtara ya narị okporo ahịhịa amị ise (500). 18 Mgbe ọ tụrụ akụkụ ya nke dị n’ebe ndịda, ọ tụtara ya narị okporo ahịhịa amị ise (500). 19 Mgbe ọ gara tụọ akụkụ ya nke dị n’ebe ọdịda anyanwụ, ọ tụtara ya narị okporo ahịhịa amị ise (500). 20 Ọ tụkwara akụkụ ya anọ. O nwere mgbidi gbaa gburugburu.+ Ogologo ya dị narị okporo ahịhịa amị ise (500), obosara ya adịrị narị okporo ahịhịa amị ise (500).+ E ji mgbidi ahụ mee ka ebe nsọ dịrị iche, ebe nkịtị adịrị iche.+
^ Ya bụ, ụlọ e kwuru okwu ya n’amaokwu nke mbụ.
^ Na Hibru, “ụlọ dị n’ime.”